Sida loo xusho lammaanaha Pokémon ee Pokémon Go | Wararka IPhone
Sida loo xusho lammaanaha Pokémon ee Pokémon Go
Cusbooneysiinta cusub ee Pokémon Go ayaa noo keentay warar xiiso leh, laakiin shaki la'aan, midka sababay kicinta ugu badan ayaa ah sameynta saaxiibka Pokémon. Sidii ka dhacday Pokémon Yellow sanado badan ka hor, waxaa nala socon kara Pokémon meel walba abaalmarinna waan ka helaynaa. Waa hab xoogaa fudud oo lagu helo nacnac. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu way ka duwan tahay tan, waana taas marka loo eego tirakoobyadii ugu dambeeyay, dadka isticmaala joogtada ah ee Pokémon ayaa hoos u dhacay 80% marka la barbar dhigo toddobaadyadii ugu horreeyay ee la bilaabay, waxay umuuqataa in qandhada Pokémon ay dhimaneyso inkastoo ugu dambeysay cusbooneysiinta.
Marka la soo koobo, xulashada Pokémon Companion waa wax iska fudud, waa inaan gujino shaashadda halka isticmaaleheena u muuqdo inuu furayo menu-ka. Markuu furmo, waxaan gujineynaa xumbada ku taal geeska midig ee hoose si aan ubucno menu-ga cusub ee macnaha leh seddex ikhtiyaar: Xusuus-qor, Wehel iyo Habee. Way cadahay waa maxay doorka na xiiseynaya munaasabaddan, sida iska cad waa lamaanaha. Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aan qaabeyno, liiska Pokémon-keena ayaa soo muuqan doona waxaan dooran doonnaa midka aan dooneyno. Haddii aan horey u dooranay mid, waa soo muuqan doonaan, oo ay la socdaan macluumaadka ku saabsan tallaabooyinka.
5Km kasta oo aan la soconno isaga waxaan abaalmarin u heli doonnaa nacnac. Hadda laga bilaabo labadaba qaybta bidix ee hoose ee biraawsarka iyo sawirkeenna tababaraha lamaanaha Pokémon ee aan xulanay ayaa soo muuqan doona. Waa hab lagu helo nacnac badan, ama nacnac gaar ah Pokémon oo aanan inta badan helin. Xusuusnow, waxaad u baahan doontaa 5Km si aad u hesho nacnac badan. Waa hab lagu cusboonaysiiyo dalab si aad ah hoos ugu dhacaya maalmaha la soo dhaafay, illaa heer in xitaa awoodda warbaahintu ay aad u yar tahay xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo xusho lammaanaha Pokémon ee Pokémon Go
Ukunta 2km (marka laga reebo xarfaha hore) waxay u baahan yihiin 1km si nacnac loo helo, ukunta 5km iyo xarfaha hore waxay u baahan yihiin 3km, 10km ukunta waxay u baahan yihiin 5km.
Tijaabi adkaysiga biyaha ee iPhone 7
Shrek iyo asxaabta, bilaash wakhti xadidan